IJake's kwiLake, kuMgangatho oPhambili weChalet - I-Airbnb
IJake's kwiLake, kuMgangatho oPhambili weChalet
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJulie K.
UJulie K. yi-Superhost
Vuka uye ekuphumeni kwelanga okuhle kwiLake Louise entle! Igumbi lokulala labucala, igumbi lokuhlambela, indawo yokuhlala kunye nekhitshi kwikhaya lechibi elinomnyango owahlukileyo. Kubandakanya ukusetyenziswa kwedokhi kunye nedekhi. Imizuzu esuka kuThe Chain of Lakes, olona kongeza lutsha kwinkqubo yethu yepaki, Lake Brophy Park, Lake Carlos State Park, Carlos Creek Winery, Breweries, Inspiration Peak, Andes Tower Hills, Snowmobile Trails, Central Lakes Trail, igalufa, kunye nokutya e. iindawo zethu zokuchithela iiholide nakwiBroadway.
I-chalet ijonge empuma ibonelela ngokukhanya kwelanga okuninzi kwendalo kunye nokuphuma kwelanga okuhle. Uyilo lubanzi kwaye luvulekile, kodwa lusapholile emlilweni. Ikhitshi eligcweleyo linayo yonke into oyifunayo ukuze ukwazi ukupheka ukutya ngala maxesha e-COVID-19. Ukongeza, kukho itheyibhile yobungakanani bechibi ukuze iindwendwe zizonwabele. I-Fiber optic yesantya esiphezulu se-intanethi ibandakanyiwe kunye neNetflix, ixesha lokubonisa, i-HBO kunye neHulu Plus.
65" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-HBO Max, I-Netflix
5.0 · Izimvo eziyi-82
ILake Louise ifumaneka nje iiyure ezi-2 ukusuka kwiiTwin Cities kunye neekhilomitha ezi-4 ukusuka kwidolophu yokuphumla yaseAlexandria MN. Imizuzu yokufikelela kwikhonkco lamachibi aquka iLake Carols kunye neLake Le Homme Deu. Iimayile ezi-3 ukuya kwiLake Brophy Park entsha, ngokuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela intaba, ulwandle, izindlu zangasese, indawo yokudlala efikelelekayo yokukhubazeka kunye neendlela zokuhamba ngekhephu. Kumgama oziikhilomitha ezingama-55 ubude be-Central Lakes Trail enebhayisekile egangathiweyo kunye nendlela yokuhamba enqumla eDouglas County ukusuka e-Osakis ukuya eGarfield ukuya kwiiNgxangxasi zeFergus, ekwadibanisa nomzila weLake Wobegon.
Yintoni enye ekufutshane:
Big Splash Indoor Waterpark - 6 min drive
Carlos Creek Winery - 7 min drive
Umfanekiso omkhulu we-Ole Viking - i-10 min drive
Ipaki yokuzonwabisa yaseCasey-11 min drive
Ithiyetha L'Homme Dieu - 13 min drive
Central Lakes Trail - 55 miles umkhondo elide
IiKhosi zeGalufa ezininzi
I-Interlochen Inn - i-10 min drive
Indawo yokugcina - 12 min drive
Zorbaz - 12 min drive
Travelers Inn - 13 min drive
I-Pizza Ranch - i-15 min drive
Indawo kaJan, ivotele i-pancakes ye-MN engcono kakhulu - i-12 min drive
Umbuki zindwendwe ngu- Julie K.
Ndisoloko ndifumaneka ngetekisi. Ndihlala kwindlu kamamazala kwinqanaba lokuphuma. Iindwendwe zinosetyenziso olugcweleyo lomgangatho wabucala we-chalet onomnyango wabucala kwaye ubandakanya ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlala, indawo yomlilo, kunye netafile yephuli. Ndine-beagle eneminyaka eli-11 ubudala eya kusebenzisana neendwendwe.
Ndisoloko ndifumaneka ngetekisi. Ndihlala kwindlu kamamazala kwinqanaba lokuphuma. Iindwendwe zinosetyenziso olugcweleyo lomgangatho wabucala we-chalet onomnyango wabucala kwaye ub…